Notablist: Dhizaini Kufuridzira uye Kukwikwidza Tsvagiridzo yeemail Vashambadzi | Martech Zone
Notablist misika yavo seEndaneti Tsamba Inotsvaga Injini, iine mamakisi anopfuura mamirioni mashanu ekutsvaga tsamba dzeemail kudarika 5 Vaparidzi. Zvishandiso zvakaita seizvi zvinonakidza kune vagadziri vanoshuvira kuwana kurudziro kubva kumakiyi akakosha kana vatengesi veadhijitari vanoda kuona kana vakwikwidzi vavo vari kutumira uye kuti ndeapi marudzi etsamba nezvibvumirano zviri kutaurwa.
Kana iwe uri bhizinesi risina zviwanikwa zvekuyedza, maturusi aya anogona kunyanya kubatsira nekuti vaparidzi vakuru vanoshandisa yakawanda yekuedza pakuwana maemail chaiwo!
Notablist ine zvishoma zvishoma maficha uye mabhenefiti:
Kutsvaga Kwapamberi & Kufirita - Tsvaga nenyaya, sender zita, sender kero email, muviri mameseji kana kunyange URL. Sefa nezuva, Alexa chinzvimbo uye kunyange ruvara.
Keyword Trending Chati - Spoti maitiro needu anofambidzana wenguva yekutarisa, wobva wasvitsa pane akakosha mafirifomu uye chaiwo mazuva kuti unyatso tarisa.
Mazuva ese Digests - Sevha nguva uye usambofa wakarasa mushandirapamwe neemaimeri enzi digests emitsva yemakero ako aunofarira.
Realtime Dzokorora - Mishandirapamwe inowanikwa yekutsvaga izvo zvavanotumirwa, uye zvakachengetwa zvachose.
24 / 7 Support - Ivo vari pano paunenge uchivada, kungave kwemubvunzo, bug ripoti kana chigadzirwa chigadzirwa.
Unogona kunyange kuwana edu apfuura zvinyorwa zviripo!
Notablist akawedzerawo Pro, yakasimbiswa sevhisi yebasa iyo inowedzera:
Yechokwadi-nguva yekutsvaga mhedzisiro - Pakarepo mushandirapamwe paunosvika, unotsvaga. Zvakare, bhatani re'Rarama Dzemagadziriso 'pane peji rezvitsva zvekutsvaga izvozvi rinoita kuti iwe uenderere mberi uchitsvaga ad-hoc yekutsvaga kwezvinhu zvitsva zvinouya.
Rarama dashboard - Kuisa chiratidzo pakutsvaga kwako kwaunoda inzira yakanaka yekugara pamusoro pezvinhu, asi hazvingave zviri nani here kana iwe uchikwanisa kuzviona zvese munzvimbo imwechete? Iyo mhenyu dashibhodhi inoita izvo chete izvo: inosanganisa mhedzisiro yeako ese mabhukumaki mune imwe nguva yenguva yekutarisa iyo inoramba ichigadzirisa sezvinhu zvitsva zvinosvika. Funga nezvazvo sekudyisa kweTwitter kwemashoko etsamba anokufarira.
Yechokwadi-nguva email yambiro - Zvimwe zvinhu hazvigoni kumirira. Kunyanya kukosha, zvimwe zvinhu hazvigone kupotsa. Neye chaiyo-nguva yekuzivisa, iwe unogona kugamuchira iyo pakarepo email kana mushandirapamwe mutsva uchisvika kune chero ako mabhukumaki.
Charting zvishandiso - Zvitsva zvekutsvaga zvatove zvinosanganisira marara emutsetse anoratidza iwo mazuva makumi mapfumbamwe ematanho ekutsvaga kwako mazwi. Asi zvinowanzo kukosha kuenzanisa akawanda mazwi kuti uone zviri kuitika kumusoro uye zviri kutsika pasi, kana kunyangwe pakati pavo pakanyanya kufarirwa. Neye visualizer, iwe unogona kuita izvo chete uye woona mhedzisiro semutsetse kana mapati machati.
Tags: yemakwikwi kutsvaga emailkukwikwidza kutsvagisaeemail zvakanakisa maitiroemail dhatabhesiemail dhizainiemail mienzanisoemail injini yekutsvagaemail kuedzaNewslettertsamba yekugadziratsamba yekufemerwanotislist